Mampitahantsika ny Samsung Galaxy S8 / S8 + vaovao amin'ny iPhone 7/7 Plus | Vaovao momba ny gadget
Mampitahantsika ny Samsung Galaxy S8 / S8 + vaovao amin'ny iPhone 7/7 Plus
Ignatius Room | | Finday, telephony
Minitra vitsy lasa izay, ny orinasa Koreana Samsung dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ilay Samsung Galaxy S8 sy S8 + be siosio. Ny zavatra voalohany manintona ny saina raha oharina amin'ireo modely S7 izay natolony tamin'ny taon-dasa dia ny tsy fisian'ny maodely fisaka, ny orinasa dia nisafidy ny handefa kinova roa, 5,8 sy 6,2 santimetatra, samy misy miolaka ny efijery, mamela ny sisin'ny anaram-bosotra izay niaraka tamin'izy ireo hatramin'ny maodely S6, Ny maodely voalohany an'ny Samsung misy ny écran miolakolaka amin'ny sisiny.
Nahazatra ny hakantony atolotray antsika ny efijery miolaka, ireo zalahy ao amin'ny Samsung dia naniry ny handeha lavidavitra kokoa ary ankehitriny dia ny sisiny ambony sy ambany no nanomboka nanjavona, izay namela ilay orinasa hanolotra fantsona misy efijery goavambe. saika mitovy habe amin'ny mpifaninana aminy, ary mazava ho azy, ny fampitahana amin'ny iPhone 7 sy iPhone 7 Plus dia tena ilaina tokoa.
Na dia tato ho ato aza dia maro ireo mpanamboatra nanandrana, ny avo indrindra dia mbola raharaha roa ihany. Samsung sy Apple dia mizara ity mofomamy mahavariana ity, mofomamy izay tsy zarain'izy ireo amin'ny olon-kafa amin'izao fotoana izao ary mitondra ny ankamaroan'ny tombony ho azy ireo. Raha tsy mandeha lavitra, 60% amin'ny karamain'ny Apple dia miankina amin'ny varotra iPhone.
1.1 Efijery Galaxy S8 vs efijery iPhone 7
1.2 Efijery Galaxy S8 + vs efijery iPhone 7 Plus
2.1 Samsung Galaxy S8 sy S8 +
2.2 iPhone 7 ary iPhone 7 Plus
3.1 Fakan-tsary Galaxy S8 vs efijery iPhone 7
3.2 Fakan-tsarimihetsika Galaxy S8 + vs efijery iPhone 7 Plus
6 Fanoherana ny vovoka sy rano
7 Loko an'ny Galaxy S8, S8 + vs iPhone 7, 7 Plus
8 Fahafahana mitahiry ny Galaxy S8, S8 + vs iPhone 7, 7 Plus
9 Vidiny sy misy
9.1 Galaxy S8 vs iPhone 7 vidiny
9.2 Vidin'ny Galaxy S8 + vs iPhone 7 Plus
Efijery Galaxy S8 vs efijery iPhone 7
Ny efijery S8 ao ny maodely 5,8-inch dia manome vahaolana 2,960 × 1440 teboka eo amin'ny efijery iray misy ny teknolojia OLED sy ny fiasan'ny Always On, miolaka amin'ny lafiny roa. Ny iPhone 7 ho an'ny anjarany dia manome antsika vahaolana 1334 × 750, vahaolana iray izay antsasaky ny mitovy ny habeny ao amin'ny Samsung.
Efijery Galaxy S8 + vs efijery iPhone 7 Plus
Ny maodely Samsung 6,2-inch, S8 +, dia manome antsika ny vahaolana mitovy amin'ny zandriny lahy, izany hoe 2960 × 1440 teboka. Amin'io lafiny io, Apple dia manome antsika vahaolana hafa amin'ny maodely 4,7 sy 5,5-inch, maha-izy azy Fanapahana iPhone 7 Plus an'ny 1920 × 1080. Hitanay indray ny fomba anoloran'ny orinasa Koreana vahaolana ambony kokoa ihany koa amin'ity maodely ity.
Tadidio fa isan'andro isan'andro, izany hoe, rehefa mampiasa ny fampiharana mahazatra isika, ny terminal dia hiasa miaraka amina vahaolana Full HD, toy ny iPhone 7 Plus, ny fihenan'ny lojika mba tsy ho very maina ny baterin'ny fitaovana S8 sy S8 + raha tsy mampiasa ny mety omeny antsika.
Rehefa mividy rafitra fikirakirana roa samy hafa dia sarotra be ny mampitaha ny zava-bitan'ny tsirairay amin'ireo mpikirakira, satria samy hafa tanteraka ny fepetra takian'ny rafitra. raha Apple dia mamolavola ny rindrambaiko sy ny fikirakirana azy, Samsung mamolavola fitaovana ho an'ny rafitra fiasa, rafitra miasa izay tsy noforonin'izy ireo. Toy izany koa no mitranga amin'ny habetsaky ny RAM ilaina hahafahana mitantana ireo loharano samihafa hanetsehana ny rafitra.
Samsung Galaxy S8 sy S8 +
Ao anatin'ny Galaxy S8 sy S8 + no ahitantsika, miankina amin'ny tsena misy azy io, ny Snapdragon 835 processeur na Exynos 8895. Ireo processeur roa ireo dia hiaraka amin'ny RAM 4 GB.
iPhone 7 ary iPhone 7 Plus
Ho an'ny ampahany, ny iPhone 7 sy 7 Plus an'ny Apple dia tantanan'ny processeur A10, processeur izay manana processeur roa hifehezana ny fanjifana bateria ary roa hafa hanetsehana ny rafitra sy ny rindranasa. Raha miresaka momba ny RAM isika, ny maodely 4,7-inch dia manome RAM 2 GB mandritra ny fotoana ny iPhone 7 Plus 5,5 mirefy manome antsika RAM 3 GB.
Fakan-tsary Galaxy S8 vs efijery iPhone 7
Manaraka ny fakan-tsary S8 manolotra antsika 12 mpx vahaolana miaraka amin'ny teknolojia Dual Pixel ary aperture 1,7, izay fakan-tsary mitovy amin'ny iray nampiharina tamin'ny maodely teo aloha. Ny niova dia ny processeur izay tompon'andraikitra amin'ny fikirakirana ny fakana rehetra. Ny iPhone 7 amin'ny lafiny iray ihany koa dia nitazona ny fika mitovy sy ny toetra mampiavaka azy teo alohany, ny iPhone 6s, nanatsara ny fizotry ny fisamborana sy ny fanodinana mitovy. Ireo maodely roa ireo dia mamela ny fandraisam-peo amin'ny kalitao 4k ary manome antsika stabilisation optika.
Fakan-tsarimihetsika Galaxy S8 + vs efijery iPhone 7 Plus
Nanapa-kevitra ny orinasa koreana aza misafidy ny hampiasa fakan-tsary roa amin'ny maodely lehibe kokoa, zavatra izay manomboka manao ny ankamaroan'ny mpanamboatra. Toa ny Note 8 no ho maodely hanombohana ny rafitry ny fakantsary roa mitovy amin'ny an'ny iPhone 7 plus. Ny toetran'ny fakantsary S8 dia mitovy amin'ny zandriny lahy, miaraka amin'ny famahana 12 mpx ary aperture 1,7. Ny iPhone 7 Plus, araka ny efa nolazaiko, dia manolotra antsika rafitra fakantsary roa misy zoro malalaka sy masom-pifandraisana telephoto, izay natambatra dia manome valiny mahatalanjona ho antsika. Ireo maodely roa ireo dia manome antsika stabilisation optika ary mamela antsika handrakitra horonantsary amin'ny kalitao 4k.
Heveriko fa tamin'ity taona ity, fantatry ny rehetra tsara fa ny iPhone 7 sy 7 Plus no fitaovana voalohany avy amin'ny orinasa monina ao Cupertino nahatratra ny tsena. tsy misy ny fifandraisana jack headphone, satria ny fifandraisana amin'ny tselatra no hany fomba mihaino ny mozika ankafizinay.
Samsung S8 sy S8 + vaovao miantehitra hatrany amin'ny fifandraisana amin'ny headphone jack ary noraisiny ny fifandraisana USB-C na ho an'ny fampidirana data na famoahana ary ahafahana mameno ny telefaona. Ny famandrihana haingana sy tsy misy tariby, fa amin'ny alalàn'ny fampidirana, dia misy ihany koa amin'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 +, fiampangana izay tsy antenaina na antenaina ihany koa ao amin'ny faritry ny Apple's iPhone.
Ny androm-piainan'ny bateria dia tsy miankina amin'ny fampiasana izay fanaontsika matetika ihany, satria ny ampahany manan-danja amin'ny fanjifana dia mifandraika amin'ny fanatsarana ny rafitra fiasa. Ny fitaovana Apple dia tsy manome fahaiza-manao betsaka raha oharina amin'ny terminal Samsung satria noho ny processeur A10 sy ny fanatsarana ny iOS 10, henjana kokoa ny fanjifana ary tsy mila fahaiza-batterie firy hamarana ny andro amin'ny bateria. Ireo vaovao Galaxy S8 sy S8 + dia manome antsika fahaizana 3000 sy 3.500 mAh tsirairay avy, raha ny fahaizan'ny iPhone 7 sy ny iPhone 7 Plus dia 1.969 mAh ary 2.900 mAh avy.
Fanoherana ny vovoka sy rano
Na ny iPhone 7 na ny iPhone 7 Plus dia samy manolotra mari-pahaizana IP67 ho antsika, araka ny fenitra IEC 60529, fanamarinana izay manome antsika fanoherana ny fiparitahan'ny rano, rano ary vovoka. Ity fanoherana ny famafazana, ny rano ary ny vovoka ity dia mety hihena vokatry ny fampiasana tsy tapaka, satria afaka mamaky amin'ny antsipiriany ao amin'ny tranokala Apple isika. Ny Samsung Galaxy S8 sy S8 + dia manome fanamarinana IP68 ho antsika, fanamarinana izay Mamela antsika hilentika ao anaty rano ny terminal 1,5 metatra mandritra ny 3 minitra farafahakeliny.
Loko an'ny Galaxy S8, S8 + vs iPhone 7, 7 Plus
Apple dia manandrana isan-taona hanentanana ny fividianana ireo maodely vaovao natombony tamin'ny fampidirana loko vaovao. Tao anatin'izay taona faramparany, ny tovolahy avy ao Cupertino dia nanampy loko vitsivitsy izay farafaharatsiny nandritra ny taona voalohany nandefasana azy ireo dia lasa mpivarotra lafo indrindra, toy ny nitranga tamin'ny iPhone 7 Glossy Black, maodely iray izay tsy misy afa-tsy amin'ny maodelin'ny 128 sy 256 GB . Ny loko farany navoakan'i Apple ho an'ny katalaogin'ny loko marobe amin'ny Red, loko iray izay iarahan'ny orinasa miady amin'ny SIDA. Ity loko ity dia tsy misy ihany koa amin'ireo maodely 128 sy 256 GB. Raha ny marina iPhone 7 sy iPhone 7 Plus dia misy Glossy Black, Matte Black, Silver, Gold, Rose Gold, ary Red.
Ny maodely Galaxy S8 sy S8 + vaovao dia ho hita ihany koa amin'ny loko maro karazana, izay ahitantsika ny mainty, volamena, mavokely, manga sy volomparasy. Ny loko volomparasy no zava-baovao lehibe hitantsika amin'ny loko isan-karazany amin'ilay sainan'i Samsung vaovao, satria ny loko teo aloha rehetra dia tonga nandritra ny taona lasa tao amin'ny faritra S7 tamin'ny endriny samihafa.
Fahafahana mitahiry ny Galaxy S8, S8 + vs iPhone 7, 7 Plus
Ny fanombohana ny iPhone 7 dia nanamarika ny faran'ny fitaovana fitehirizana 16 GB, fitehirizana iray izay tao anatin'ny roa taona lasa no fidirana lehibe ho an'ny mpampiasa maro, saingy tsy namela na inona na inona azo natao tamin'ny fitaovana. miaraka amin'ny fahatongavan'ny iPhone 6s sy ny mety firaketana horonantsary amin'ny kalitao 4k. Samy amin'izao fotoana izao iPhone 7 sy iPhone 7 Plus dia misy amin'ny kinova 32, 128 ary 256 GB.
Samsung dia manohy misafidy manolora maodely fitahirizana tokana, 64 GB, mamela ihany koa hanitatra ny toerana fitahirizana amin'ny alàlan'ny karatra microSD hatramin'ny 256 GB, nefa tsy mila mandoa maodely mavesatra ambony.
Galaxy S8 vs iPhone 7 vidiny
Samsung Galaxy S8 64GB fitehirizana: Efa misy 809 euro ho an'ny famandrihanao. Amidy amin'ny 28 aprily.
iPhone 7 misy fitehirizana 32GB - 769 euros azo alaina ao amin'ny App Store ara-batana sy an-tserasera.
iPhone 7 misy fitehirizana 128GB - 879 euros azo alaina ao amin'ny App Store ara-batana sy an-tserasera.
iPhone 7 misy fitehirizana 256GB - 989 euros azo alaina ao amin'ny App Store ara-batana sy an-tserasera.
Vidin'ny Galaxy S8 + vs iPhone 7 Plus
Samsung Galaxy S8 + 64GB fitehirizana: 909 euro efa misy amin'ny famandrihanao. Amidy amin'ny 28 aprily.
iPhone 7 Plus misy fitehirizana 32GB - 909 euros azo alaina ao amin'ny App Store ara-batana sy an-tserasera.
iPhone 7 Plus misy fitehirizana 128GB - 1.019 euro azo alaina ao amin'ny App Store ara-batana sy an-tserasera.
iPhone 7 Plus misy fitehirizana 256GB - 1.129 euro azo alaina ao amin'ny App Store ara-batana sy an-tserasera.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Mampitahantsika ny Samsung Galaxy S8 / S8 + vaovao amin'ny iPhone 7/7 Plus
the presidentdavid dia hoy izy:
Raha tsorina dia nasehon'i Samsung antsika indray ny fomba tsy misy indrafo hihoarana ireo elitista voan'ny rahona Apple….
Valiny tamin'i thepresidentdavid
Tonga ny Galaxy S8, ampitahainay amin'ny LG G6 sy Huawei P10
Ny Galaxy S8 dia efa nanamafy ofisialy ny tsaho sy ny fivoahana rehetra